I-WhatsApp izakuyeka ukusebenza kwezi mobiles kungekudala | I-Androidsis
I-WhatsApp sisicelo semiyalezo ngokugqwesa kwi-Android, yeyona isetyenziswa kakhulu. Uhlelo lokusebenza oluhlaziywa rhoqo kwaye lusebenza ekwazisweni kwemisebenzi emitsha, njengezitikha zoopopayi, phakathi kwezinye. Nangona kukho abasebenzisi abangayi kuba nakho ukonwabela ezi ndaba zingenisiweyo kwisicelo okwethutyana. Kuba iapp iyayeka ukuxhasa ezinye iimodeli emva kwethutyana.
Qho ngonyaka i-WhatsApp yazisa ngeefowuni bayayeka ukuba nenkxaso kwisithuba esingaphantsi kweenyanga ezili-12. Ngoku sinoluhlu olutsha lweefowuni apho imiyalezo yemiyalezo iza kuyeka ukusebenza kungaphelanga nonyaka. Iindaba ezimbi kwabo banazo.
Kule meko, uluhlu lweefowuni ezithile alunikwanga. Endaweni yoko, sifumana iimodeli ezinohlobo oluthile lwenkqubo yokusebenza. Umzekelo, kwimeko ye-Android, ezo modeli zine-Android 2.3.7 okanye iinguqulelo zangaphambili Abayi kuba nakho ukusebenzisa i-WhatsApp ukusukela nge-1 kaFebruwari 2020.
Kukho iindaba ezimbi kuzo zonke iifowuni zeWindows. Kwimeko yakho, Inkxaso iphela ngoDisemba 31, 2019. Iindaba ezimbi kubo, nangona kungoku nje bambalwa abasebenzisi abaneselfowuni nale nkqubo yokusebenza. Ke akuyi kubakho baninzi bachaphazelekayo.
Isicelo sisebenza kuninzi lotshintsho, ukuba ezi nguqulelo zakudala azinakuma. Ngesi sizathu, kuqhelekile ukuba unyaka nonyaka inani leefowuni ze-Android ezingasebenzisi i-WhatsApp zonyuke, kuba ingxelo ekhoyo ayikwazi ukuxhasa zonke iindaba ezifika.
Nangona kwimeko ye-Android, abo bashiyekileyo ngabo bane-Android Gingerbread okanye ngaphambili, ngokokugqibela kwedatha yokuhambisa ye-Android, abamele kwaphela i-0,3% yentengiso. Akunakubaninzi kakhulu kuya kufuneka bayeke ukusebenzisa i-WhatsApp kwifowuni yabo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » I-WhatsApp izakuyeka ukusebenza kwezi mobiles kwisithuba esingaphantsi konyaka
Ukuqhutywa kweTempile: Abazingeli beNdyebo okanye xa ndinqamlezene nemibono yokuqalisa umdlalo omtsha